Internet Marketing မှာဘာကြောင့် Email Marketing ကဘာကြောင့် အရေးပါတာလဲ? -
လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Email အသုံးပြုသူ ၃.၈ ဘီလီယံအထိ ရှိနေပါတယ်။ လူဦးရေကို တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ၃၄ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ကလည်း ဒီ Email ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုး အတွက် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းအတွင်းမှာ Communication အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနေကြပါ။ ဒီလိုပဲ Internet Marketing လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ကြော်ငြာတွေအတွက်၊ Promotion တွေအတွက် Email Marketing ကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Email Marketing က Internet Marketing အတွက် ဘာကြောင့်အသုံးဝင်တာလဲ? ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်…
Posted by Min Thuta/ Tuesday January 28th, 2020/ Blog/0Comment